Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Niverina tany JFK ny United Airlines niaraka tamin'ny sidina amoron-dranomasina
Ny fiverenan'i United ao amin'ny JFK dia maneho ny fahavononany mafy amin'ny faritry ny tanànan'i New York
United Miverina any amin'ny JFK miaraka amin'ny seza premium indrindra avy amin'ny faritry NYC
Ny sidina dia misy fiaramanidina Boeing 767-300ER namboarina miaraka amin'ny seza kilasy fandraharahana 46 sy seza 22 an'ny United Premium Plus
United dia manome serivisy avy amin'ny seranam-piaramanidina lehibe telo ao amin'ny faritry New York City
Miverina ao amin'ny seranam-piaramanidina John F. Kennedy (JFK) ny United Airlines, miasa ankehitriny amin'ny serivisy mivantana amin'ireo ivon-tseranan'i West Coast - Los Angeles International Airport (LAX) ary seranam-piaramanidina iraisam-pirenena San Francisco (SFO) avy any New York City. Hampiasa ny fiaramanidiny Boeing 767-300ER ity kaompaniam-pitaterana ity izay misy seza fidirana amin'ny fidirana an-dalambe 46 sy sokajy 22 United Premium Plus® XNUMX. Ny zotram-piaramanidina dia miasa ny seza be indrindra eo anelanelan'ny faritra New York City sy Los Angeles sy San Francisco mitambatra.
United Airlines Manidina sidina iray mandeha indray izy izao, dimy andro isan-kerinandro mankany amin'ny seranam-piaramanidina Andrefana rehetra, miaraka amin'ny drafitra hampiakarana avo roa heny ny sidina rehefa mitombo ny fangatahana. Miverina ao amin'ny JFK ilay mpitatitra entana taorian'ny fiatoana naharitra dimy taona ary manolotra serivisy avy amin'ny seranam-piaramanidina lehibe telo ao amin'ny faritry New York City.
“Ny fiverenan'i United ao amin'ny JFK dia tsy taratry ny fanoloran-tenantsika mafy amin'ny faritry ny tanànan'ny New York, fa koa amin'ny fampitomboana ny serivisy mankany sy amin'ny toerana tian'ireo mpanjifantsika hisidina,” hoy i Ankit Gupta, filoha lefitry ny drafitra sy ny fandaharam-potoana eo amin'ny tamba-jotra anatiny. "Miaraka amin'ny fanampin'ny JFK, United dia manolotra serivisy tsy manam-paharoa, fanamorana bebe kokoa, safidy betsaka ary vokatra tsara indrindra ho an'ny mpandeha manerana ny faritra New York City rehefa miverina eny amin'ny lanitra izy ireo."
"Faly izahay mandray ny United Airlines hiverina any amin'ny seranam-piaramanidina Kennedy," hoy i Charles Everett, Tale Jeneralin'ny John F. Kennedy International Airport. "Manolo-tena hatrany izahay amin'ny fiarovana avo lenta sy azo idirana ary fanamorana ny mpandeha izay mampiasa ny seranam-piaramanidina ao amin'ny Port Authority, ary ny fanapahan-kevitr'i United dia dingana lehibe amin'izany."
Ny asan'i United ao amin'ny Terminal 7 an'ny JFK dia hanome fidirana an-tsokosoko ho an'ny mpanjifa. Ny faritry ny lavarangana dia manolotra kioska fandokafan-tena, miaraka amina podium valo izay misy ny toerana misy azy miala ny toerana fanamarinana TSA. Dia an-tongotra kely fotsiny avy amin'ny fisavana fiarovana, dia ho hitan'ireo mpandeha ny vavahady ampiasain'ny United. Ny mpanjifa koa dia handray soa amin'ny fifandraisana mora amin'ireo mpiara-miombon'antoka Star Alliance am-polony ao amin'ny JFK, ao anatin'izany ny fidirana amin'ny toerana 15 any amin'ny firenena 14 hatramin'ny martsa 2021.
Lufthansa dia nandefa sidina faharoa nankany amin'ny Nosy Falkland